ATTARI का Desktop Computer किन किन्ने ?
हाम्रा Comptuer हरु किन Assembled Computer हरु भन्दा राम्रा र उच्च गुणस्तरका हुन्छन ?
हामी Motherboard, SMPS, Cabinet, Keyboard, Mouse, Webcam आदि Parts हरु हामी आँफै order गरेर Import गर्छौ‌ । हाम्रा यी Parts हरु बजारमा अरुका भन्दा गुणस्तर र बलिया छन । बजारमा अधिकांश Assembly गर्ने ब्यापारीहरु Importer हरुसँग यी पार्टस हरु खरिद गर्छन
Importer हरु बजारमा असाध्यै Competition भएको कारण सबभन्दा सस्तो सामानहरु आयात गर्छन । बिक्रि गर्दा हुने प्रतिस्पर्धाको कारण तिनीहरुलाई सबभन्दा सस्तो सामाग्रीमा काम गर्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा , गुणस्तर कायम गर्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ । झन कतिपय सामान हरु त पुराना part पुर्जा प्रयोग गरेर बनाउने गर्छन । भाउ कम गर्न र बजारमा अरु Importer भन्दा सस्तोमा बेच्नको लागि Importer हरु यी सामानको गुणस्तरलाई जति ध्यान दिनु पर्ने हो त्यति ध्यान दिन सक्दैनन ।
Power Supply , Motherboard आदि सामान मा नभएका Feature हरु लेख्छन र जनतालाई भ्रम पार्ने काम गर्छन । यी सामाग्रीहरु सोचे जस्तो काम नगर्ने वा चाँडै बिग्रने वा घरिघरि बिग्रने जस्ता समस्याहरु बाट ग्रसित हुन्छन । झन नेपाल जस्तो विजुली घरिघरि जाने ठाउँमा त बजारमा Assembly गरेका Computer हरु बाट जनता असाध्यै पिडित छन । हामीले नेपालको वास्तविकतालाई ध्यान दिएर Power Supply लाई सजिलै नविग्रने गरि बनाएका छौं । हाम्रा China का Partner ले आफ्ना Engineer हरु नेपाल पठाएर यहाँको विजुलीको सप्लाई सम्बन्धि अध्ययन गरेर Power Supply को बिषेश Design तयार पारिएको छ । Power Supply मा Surge Protection, Low Voltage Auto Safety जस्ता Feature हरु समावेश छन् ।
नेपालमा VCD / DVD र Color TV जस्ता घरायसी प्रयोगका सामाग्रीमा नेपालमा 10 बर्ष भन्दा बढि देखि हामीले नाम कमाएका छौं । हाम्रा सामान प्रयोग गर्ने मानिसहरु हाम्रा सामाग्रीको उच्च मूल्याँकन गरेका छन । गएको १० बर्षमा हामीले ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराएको सेवा र सन्तुष्टी प्रति हामी गर्व गर्दछौं ।
हामी आँफै Importer भएकाले यी सबै पार्ट हरु आँफै China वा अन्य स्थान बाट गुणस्तर प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्र खरिद गर्दछौं । हामी यी सामानहरुको बारेमा जनतालाई नभएका Feature हरु बताएर भ्रम पार्ने काम हामी गर्दैनौं । गुणस्तर पार्टस पुर्जा प्रयोग गर्ने भएकाले हामी सजिलै वारेन्टी दिन सक्छौं । बजारका सामाग्रीमा वारेन्टी वोले अनुसार पुर्‌याउन सक्दैनन वा घरिघरि मर्मत गर्नु पर्ने समस्याले तपाईं पनि थाक्नु हुनेछ
सब भन्दा ठूलो कुरो के भने हाम्रो मूल्य पनि बजारमा असाध्यै प्रतिस्पर्धापूर्ण छ । Quality राम्रो , After Sale सेवा भरपर्दो र बजारमा अति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य उपलब्ध गराएर हामी तपाईंलाई ढुक्क हुन मद्दत गर्दछौं ।
त्यसैले Attari का Computer हरुलाई तपाई DELL वा HP जस्ता Brand का Computer सँग तुलना गर्न सक्नु हुन्छ । Local ठाउँमा assemble गरिएका Computer हरु र Attari का Computer हरुमा अतुलनीय फरकहरु छन् । Attari लिएर केहि बर्षकोलागि ढुक्क हुनुहोस ।
Model No. A, 570X, 640GA मा ATTARI को AT662 मोडेलको Motherboard लागेको छ । यसको Stock Feature हरुको लागि कृपया हाम्रो website: www.kathmanducomputer.com हेर्नु होला । AT662 ज्यादै बलियो र उच्च गुणस्तरको वोर्ड हो । यसमा Mirage™ 1 graphic engine, and MuTIOL® Technology प्रयोग भएको छ । यसले DDR2 RAM 4GB सम्म support गर्छ , SATA Channel2वा4भएकाले High Speed SATA Hard Disk2वा4वटा सम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसको IO पनि South Bridge मा Integrated भएकोले यो बोर्डको Form Factor सानो छ । यसमा Integrated Sound र 100 MHz Network Card Integrated छन् ।
यी मोडेलहरु घर , अफिस , साईवर आदिकोलागि सुलभ मूल्यमा प्राप्त हुने ज्यादै राम्रो Choice हो ।
Model#: 640GX, 640GX9, 640GX11 मा ATTARI द्वारा निर्मीत Model No. PXG31M को Motherboard लागेको छ । यो वोर्ड Intel को G31+ICH7 Chipset मा आधारित board हो । वजारमा उपलब्ध G31 का बोर्डहरु भन्दा LPT port जस्ता Feature हरु Extra भएको र गुणस्तरिय Part पुर्जा प्रयोग गरिएकोले यो बोर्ड को stability ज्यादै राम्रो छ । यसमा Inetl 3100 Graphics Media Accelerator प्रयोग गरिएको छ र यसले Intel® Core™2 Duo CPU हरु Support गर्छ । तर यसमा हामीले P4 का CPU मात्र प्रयोग गरेका छौं । Attari का 570A, 570X र 640GA को तुलनामा केहि महँगो भए ता पनि यदि तपाई High Performance Game खेल्नु हुन्छ र Extra Graphic कार्डको प्रयोग गर्नु हुन्छ भने सायद यी मोडेलहरु तँपाईकोलागि उपयुक्त हुन सक्छन ।
बिस्तृत जानकारीकोलागि कृपया हाम्रो web-site www.KathmanduComputer.com हेर्नु होला ।